အဝတ်အထည်လုပ်ငန်းManufacture of wearing apparel, except fur apparel
အထွေထွေကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း Other manufacturing n.e.c.
ရေစုဆောင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်းလုပ်ငန်းWater collection, treatment and supply
အထွေထွေ ပုဂ္ဂလိကဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းOther personal service activities n.e.c.
စုပေါင်းရုံး စီမံရေးရာ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းCombined office administrative service activities
စာရွက်စာတမ်းပြင်ဆင်ခြင်း၊ မိတ္တူကူးခြင်း နှင့် ရုံးအကူလုပ်ငန်းPhotocopying, document preparation and other specialized office support activities
အထွေထွေ အခြေခံလုပ်သားElementary workers not elsewhere classified
စက်ချုပ်ဆရာTailors, dressmakers, furriers and hatters
အထွေထွေအထည်ချုပ် လုပ်သားGarment and related pattern-makers and cutters
အထွေထွေရုံးစာရေးGeneral office clerks
စက်ယက်ကန်း စက်မောင်းWeaving and knitting machine operators
အထွေထွေ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်သားPersonal services workers not elsewhere classified
အထွေထွေလုပ်သား Ministry Of Health တောင်ကြီး 10 ဦး အသေးစိတ်
ဒုဦးစီး Ministry of Commerce တောင်ကြီး 1 ဦး အသေးစိတ်
ယာဉ်မောင်း၊သံလမ်းလုပ်သား၊ရုံးအကူ Ministry of Commerce တောင်ကြီး 30 ဦး အသေးစိတ်
အငယ်တန်းစာရေး Ministry of Commerce တောင်ကြီး 1 ဦး အသေးစိတ်
အစောင့် Ministry of Commerce တောင်ကြီး 1 ဦး အသေးစိတ်
ရုံးအကူ Ministry of Commerce တောင်ကြီး3ဦး အသေးစိတ်
နည်းပြ Ministry of Commerce တောင်ကြီး 8 ဦး အသေးစိတ်
အငယ်တန်းစာရေး Ministry of Commerce တောင်ကြီး2ဦး အသေးစိတ်
အလုပ်ရှင် မှတ်ပုံတင်ရန် | Log-in
အလုပ်သမား မှတ်ပုံတင်ရန် | Log-in
» Warning: Unknown: open(/var/lib/php5/sess_lka69e8sn5gglbokq0te8lelj4, O_RDWR) failed: Read-only file system (30)
• Line0: Unknown
» Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php5)